ICookhouse @ Ukucoca kukaHana, Haast - I-Airbnb
ICookhouse @ Ukucoca kukaHana, Haast
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJan
Wamkelekile kwi-Cookhouse @ Ukucoca kukaHannah kunye nendlu yethu ehlaziyiweyo ngokwesiko inovelwano kwixesha layo kunye nobuhle bendalo obuyingqongileyo.
Imi eHannahs Clearing, umgama oyimizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 xa uqhuba eMazantsi eLokishi yaseHaast, iKhaya lethu leHolide yezeMbali, (eyayisakuba “yiCookhouse” yabasebenzi kwi-Old Carters Mill), ihleli phakathi kobuhle oburhabaxa beSouth Island’s Wild West Coast. Umda wehlathi elinemvula kunye noLwandle lweTasman, ngokwenene yindawo entle yokubalekela izibini, iintsapho kunye nabahlobo.
Ihlaziywe ngokupheleleyo ngekhitshi elikhulu kunye ne-oveni ye-gourmet, i-dishwasher, i-microwave, iplani evulekileyo yokutyela kunye nokuhlala, i-Sky TV, umlilo omkhulu wangaphakathi wezo ntsuku zimanzi kunye nezasendle zaseWest Coast, amagumbi amane abekwe kakuhle ahlala asibhozo (amagumbi okulala ama-2 aneKing Beds eguquguqukayo I-2 x yabantu abangabodwa, igumbi lokulala eli-1 elinee-singles ezi-3, igumbi lokulala eli-1 eline-1 eyodwa), igumbi lokuhlambela eli-1 elitofotofo elinebhafu, ishawa kunye nendlu yangasese, igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa kunye nendlu yangasese - uya kuzifumana ukwindawo ephumla kakhulu, epholileyo kwaye ekhululekile.
Imiswe kulwahlulo lwabucala olunokufikelela kuLwandle (malunga neemitha ezingama-50 ukusuka kude), kukho umgangatho omkhulu onendawo yokosa inyama kunye nomgodi womlilo wokutshisa iinkuni zaselwandle kunye ne-toast marshmallows.
Unxweme lweHana oluhlala lushiywe luhlala inkangala (ngaphandle kwe-driftwood) ngumboniso ngokwawo nolwandle ngenye imini luzolile kakhulu kwaye ngokulandelayo lube sisiphango samaza alwayo (ukuqubha akucetyiswanga)!
Nokuba yeyiphi na indlela oqhuba ngayo ukuya kwiCookhouse, ezantsi kuNxweme oluseNtshona okanye ngaphaya kweHaast Pass esuka eWanaka, uya konwabela intaba enomtsalane, ihlathi, ulwandle nomlambo, kubandakanywa nokuhamba okuninzi kunye nokubona indawo.
Ke yiza uhlale kwindawo yethu entle yokuphumla kwaye ungqongwe zezona ndawo zibukekayo zaseNew Zealand!
57" HDTV ene-intambo yepremiyamu
4.91 · Izimvo eziyi-58
Ulwandle lwethu (iHannah's Beach) lunomtsalane nokuba kukwisaqhwithi okanye imini ezolileyo. I-Mussel Point ibekwe phezulu elunxwemeni ukuya kuMantla e-Cookhouse- nokuba uhambe i-45mins ecaleni lolwandle okanye uqhube i-5 mins phezulu kwendlela!
Umphathi wethu weNgingqi u-Meg yinkanyezi kwaye iyafumaneka kuyo yonke imibuzo yakho. Uya kuqhagamshelana xa sele uhlala.